2009 November | MoeMaKa Burmese News & Media
>Aung Way – Guru 1 Year Poem
> … … ကဲ့သို့ သော အမေ့ကဗျာများ အောင်ဝေး နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၉ အမေ့အိမ်မှာကျနော်ကနံရံကိုမှီထားတဲ့ ဂစ်တာ။ ဝေးသွားတဲ့အခါဒေါင်းအလံပတ်ထားတဲ့မောင်းပြန်သေနတ်ဟာကျနော်ဖြစ်ခဲ့။ နောက်ဆုံးသာဂစ်တာကြိုးပြတ်လေး တမျှင် ကျည်ဆန်ခွံလေး တခု ပန်းလေးတပွင့် ထိုးစိုက်ထားတဲ့...
>UMEH activities in N Oakalapa tsp
> မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်က မြောက်ဥက္ကလာတွင် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ဝင်းမြတ်၊ ရန်ကုန်နိုဝင်ဘာ ၃ဝ၊ ၂ဝဝ၉ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်တချို့တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက် တံဆိပ် ပါရှိသော မီတာဘောက်စ်များကို အာဏာပိုင်တို့၏ အစီအစဉ်ဖြင့် စနေနေ့က လိုက်လံ လဲလှယ်...
>29th NOV 2009 – MoeMaKa Radio
> နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၉ – မိုးမခရေဒီယို အနှစ် … မာမာအေး သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မတရားတဲ့ဥပဒေများ – အောင်ကျော်ခင်၊ ခေတ်ပြိုင် ဆစ်ဒနီတလွှား သတင်းစကား ထင်ပေါ်ကျော်ကြား...
>USDA promotion in Rangoon (follow-up news)
> ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းက လူထုငွေကြေးဖြင့် နာမည်ကောင်းယူတောင်ဒဂုံတွင် လမ်းပြင်ရန် ငွေကောက်ဝင်းမြတ်၊ ရန်ကုန်နိုဝင်ဘာ ၃ဝ၊ ၂ဝဝ၉သောကြာနေ့က ပြုလုပ်သည့် ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်း နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး ညစာစားပွဲတွင် တွေ့ရသော အသင်းဝင်များနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းက လမ်းပြုပြင်ရေး...
> နေမျိုးဆေး၏ ရှေးခေတ်အမျိုးသမီးများကို ထိုင်းတွင် ပြသမည်မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ဝဝ၈နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂ဝဝ၉ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ မြန်မာပန်းချီပြခန်းတွင် နေမျိုးဆေး၏ တကိုယ်တော်ပြပွဲ ပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေသည်။ သုဝဏ္ဏဘူမိ ပန်းချီ ပြခန်းတွင်...
>Revolution participant 08
> အရေးတော်ပုံ ရင်ခုန်သူများ (အပိုင်း – ၈) အောင်ဝေး နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂ဝဝ၉ (ပန်းချီ အောင်လတ်) သတင်းစာများသည် သမိုင်းကိုပြောနေကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာသမိုင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင် ဟို လွန်ခဲ့တဲ့...
>Mar Mar Aye 296
> ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ် အမှတ် ၂၉၆ ဘောလယ်သီချင်းများမာမာအေးနိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂ဝဝ၉ “မူလက ‘သဘောလယ်’ သီချင်းလို့ ခေါ်ကြသတဲ့။ တဖြည်းဖြည်း ရွေ့လျောလာတော့ ‘ဘောလယ်’ ဖြစ်လာတယ်” သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစ ရှင်၊...
>Saung Yun La – Fath and Book Keeping – Poem
> သစ္စာလက်ကျန်ရှင်းတမ်းမှာ အကြွေးမရှိကြေး ဆောင်းယွန်းလ နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၉ ဘာလို့… သစ္စာမရှိတဲ့ ပန်းတွေမှ ငါတို့ ဥတုမှာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လုယက် ရွေးပွင့်ပြကြရတာလဲ …. ဖော်လန်ဖားမှ လန်းမယ့် ပန်းတွေ...
>people and politics
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၄၈) လူထုကြားက နိုင်ငံရေးထိန်လင်း နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂ဝဝ၉ နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံတွေအတွင်းမှာ နေထိုင်သူတွေရဲ့ နိစ္စဓူဝ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ ဒီလူတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အရာက ပြည်သူတွေကြားမှာပဲ...
>Than Shwe – Free & Fair Election in 2010, again
> ၂၀၁၀ မှာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးဦးမည်ဟု မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်က ပြော မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၉ ယနေ့ထုတ် မြန်မာစစ်အုပ်စုသတင်းစာများတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက အထက်ပါအတိုင်း ၎င်း၏...
>Nyan Oo Maung – Beauty inside
> ရင်ထဲက အချို ဉာဏ်ဦးမောင် နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၉ ဒီနေ့ နှုတ်ဆက်စကားကို မိတ်ဆက်ကာပြောပေးဖို့ ကိုယ့်အလှည့်ကျတယ်။ ကိုယ့်အရင်က တော်တော်များများ ပြောသွားကြပြီ။ အာမေးနီးယန်းအတန်းဖော်က Padex Inspexsk-ကောင်းသောညနေခင်းပါလို့နှုတ်ဆင်ရင် Lavem-လို့...
> Iranian judge and activist Shirin Ebadi, pictured here in June, won the 2003 Nobel Peace Prize.(CNN) အီရန်အာဏာပိုင်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကို...
>Nov 27 2009 – Burmese Journal Digest
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၉ အဆိုတော်မေဆွိ မြန်မာပြည်သို့ ဖခင်ကျန်းမာရေးကြောင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိ ပုသိမ် ခရီးသည်သင်္ဘော မှောက်၊ ၃၃ ဦး...
>Maung Thara’s story 02
> ကြောင်ခံတွင်းပျက် နဲ့ ဆက်ရက်တောင်ပံကျိုးမောင်သာရနိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂ဝဝ၉ အပြည့်အစုံသို့
> မြန်မာပြည်မှ မြင်း ၆ ကောင် ပတ်စ်ပို့ရပြီမိုးမခအထောက်တော်၊ ရန်ကုန်နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂ဝဝ၉(photo: wallpapergate.com) မြန်မာပြည်ရှိ ပြိုင်မြင်း ၆ ကောင်အတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြုလုပ်ပေးလိုက်သဖြင့် နိုင်ငံတကာ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲများသို့ သွားရောက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း...
> သိန်း ၇၀၀ ဖိုး ယစ်မျိုးခွန် မော်လမြိုင်အာဏာပိုင်တို့ အပျောက်ရိုက် မိုးမခထံ ပေးစာ၊ မော်လမြိုင်သား နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၉ ကျွန်တော်တို့ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့မှာ ကြားသိနေရတဲ့သတင်းကတော့ မယက...
>Gaw She – Towards Fellow Siblings
> သွေးချင်းတွေဆီ ဂေါ်ရှယ် နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၉ မဟာအပြုံးပိုင်ရှင်လို့ တင်စားချင်လောက်အောင် နှစ်လိုဖွယ်အပြုံးနဲ့ အတူ သူငယ်ချင်းကို အမြဲတမ်း တွေ့ရတယ်။ သူ့ဘဝကို သူ အမြဲ ကျေနပ်ပျော်ရွင်နေပုံပဲ။ တခြားသူတွေကို...
>Win Paw Maung – Korea Burmese Poem Night
> ကိုရီးယား-မြန်မာ ဒုတိယ ကဗျာည ၀င်းပေါ်မောင် နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၉ ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့ မာဖိုရပ်ကွက်က ခန်းမတခုမှာ ကိုရီးယား-မြန်မာ ကဗျာ...
>Lu Bo – Blind Men’s Meaning on Civil Society
> မျက်မမြင်ပုဏ္ဏားရဲ့ Civil Society လူဗိုလ် နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၉ ဖိုးထောင် – မေးချိန်တန်လို့ မေးရတော့မှာပဲ ကိုလူပွားရေ။ တလောတုန်းက အင်တာနက်ထဲမှာ ပွဲဆူသွားခဲ့တဲ့ “အတ္တ ပရဟိတလုပ်ငန်း၊ လမ်းသစ်...
>Zay Hmine – Europe Fever Poem
> ဥရောပ အဖျား ဇေမှိုင်း နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၉ ၆, ၈ တိုင်ပင် ဂို ဂို ဖြေးဖြေးလေး ငြိမ့်လို့ တယောသံတွေဝင် ရစ်သမ်ပါးပါးလေး … ကြီးဒေါ်ကြီးက ပြောတယ်...